Nigeria: Xeer-ilaaliye Xeerka Jabiyay Dambiyona Loo Heesto – Heemaal News Network
Gudida la dagaalanka Musuqa Iyo Ka Hor-taga Dambiyada dhinacyada Dhaqalaha Iyo Maaliyada ah Nigeria ee magaceeda loo soo gaabiyo (EFCC), ayaa dacwado dhawr ah ku soo oogay xeer ilaaliyihii hore ee Nigeria Mohammed Adoke, kaas oo looga shikisan yahay inuu qaatay lacag laaluush ah oo dhan 1.3bn oo doolar lacagtaas oo loo dusiyay waqti la iibinayay xidhmooyin shidaal ah, si uu indhaha uga qarsado.
Shirkada Wayn ee shidaalka Baadha ee Shell iyo Shirkada kale ee maxaliga ah ee shidaalka baadhidiisa ka shaqaysa ee lagu magacaabo Eni ayaa iyaguna lagu soo eedeeyay in ay sifo sharciga baalmarsan gacan uga gayteen laaluushka lagu tuhunsan yahay inuu qaatay Mr Adoke.
Mr Adoke ayaa ku gacansayday eedaha loo soo jeediyay, dhankooda ayaa iyaguna shirkadaha shidaalka baadha ee Shell iyo Eni ayku gacan saydheen in ay ku kaceen wax-isdab-marin.
Xidhmooyinkan saliida ah ee la musuqay ayaa la iibiyay sanadkii 2011, waxana ay soo jiiteen indhaha caalamka, taas oo dhalisay in baadhitaano caalami ah lagu sameeyo, sharkadaha waawayn ee saliida baadha ee kiisku dabada galiyay iyo siyaasiyiin dhawr ah oo reer Nigeria ah.
Mr Adoke oo Xeer-ilaaliyaha guud ee Nigeria ahaa intii u dhaaysay 2010 ilaa 2015-kii, ayaa waxa xidhay Booliska Caalamiga ah ee Interpol waqti uu ku sugnaa Dubai bishii November ee sanadkii tagay ee 2019., waxana ay u gacan galiyeen Gudida la dagaalanka musuqa iyo ka hortaga dambiyada dhinacyada dhaqaalaha iyo maaliyada ah ee Nigeria ee EFCC.